Maalin: Janaayo 13, 2019
Akçaray Cilmi-baadhis lagu Sameeyay
Mid ka mid ah laxiriirayaasha Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, Vatman, oo ka shaqeeyey Ulaspark, wuxuu qaatay tabobarro ku saabsan talaabooyinka badbaadinta iyo wadista baabuurta. Faa'iidooyinka laga helo adigoo aan xaadirin 32 vatman, dardar deg deg ah ama xajin lama filaan ah [More ...]
Nidaamka Isgaadhsiinta Magaalooyinka ee Istanbul
Kulanka Xiriirinta DHMI 2019 Dhammaad
Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha Kaabayaasha ee İskurt ayaa ka qeybgalay maalintii ugu dambeysay ee “Shirka Isuduwidda DHMİ 10 ee yapılan oo lagu qabtay inta u dhaxaysa 12-2019 Janaayo Xarunta Xarunta Golaha DHMİ. Wasiir Kuxigeenka Iskurt wuxuu ku faraxsan yahay ka soo qeyb galka kulanka [More ...]
Mid ka mid ah mashruucyada gaadiid ee muhiimka ah, oo ay dhiseyso Dawladda Hoose ee Magaalada Kocaeli, ayaa laga dhisayaa Isweydaarsiga Iskuxirka Magaalada Karamürsel. Bedka wuxuu daboolay 19 mitir ballaaran, 290 mitir ballaaran [More ...]
Maanta taariikhda: 13 Janaayo 1931 Ataturk wuxuu ku yaal Malatya tareenada ...
Maanta oo ah Taariikhda 13 Janaayo 1931 Atatürk wuxuu Malatya ka sheegay in jidadyada tareemada ay hub muhiim ah ka weyn yihiin qoriga, jumlada “Qaranka Turkiga waa farshaxankii ugu horreeyay ee bari; Wuxuu ku faani doonaa in farshaxan sameeyihiisii ​​uu muujiyay mar kale shaqadiisa. Tareennada [More ...]